गाउँपालिका अध्यक्ष राई भन्छन् : असार मसान्त सम्ममा सबै वडा झिलिमिलि बनाउँछु
३०७१ पटक पढिएको
भोजपुर : ध्रुबराज राई कुनै नयाँ नाम हैन बिद्यार्थी आन्दोलन होस् या अन्य क्षेत्रमा जोसिलो,हक्की स्वभावका राई अहिले भोजपुर जिल्लाको पश्चिमि टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाको प्रमुख भई जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्दै आउनु भएको छ । अध्यक्ष राई आफ्नो गाउँपालिकालाई कसरी सुन्दर पार्न सकिन्छ, कसरी अरु भन्दा उत्कृष्ठ बनाउँन सकिन्छ भन्दै, हरेक कुरालाई महत्वका साथ काममा ब्यस्त हुनुहुन्छ । स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब अढाई बर्ष भई सक्यो यस बिचमा गाउँपालिका राई के मा ब्यस्त हुनुहुन्छ वा के गरी रहनु भएको छ भनि हामीले छोटो कुराकानी गरेका छौँ ।
१) यो अबधिको समयमा के कस्ता काम गरिरहनु भएको छ ?
ट्याम्के मैयुङ गाउँपालिकाको कपासे भन्ज्याङ देखि तिन भङ्गाले सम्मको ट्राक खोली सकियो र स्तरउन्नति भई राखेको छ, सबै वडाकार्यालयलाई सडक सञ्जालमा जोडि सकियो । बिजुलीबत्तीको अबस्थामा गतआर्थिक बर्षमा ५ वटा वडामा बत्तीबालि सकियो र अबको यो असार मसान्त सम्ममा सबै वडामा झिलिमिलि बत्ती पुग्नेछ । साबिक छिनामखु र लेखर्क गाबिस पुरै भागमा बत्ती बाल्ने छौ । केन्द्र सरकारको करिब पाचँ करोड लगानीमा अबको असार सम्ममा सम्पन्न गछौँ ।
२) गत आर्थिक बर्षमा जुन शिर्षकमा बजेट बिनियोजन गर्नु भएको हो त्यो शिर्षकमा बजेट खर्च भयो कि काम गर्न बाँकी छ ?
गाउँपालिकाले महत्वका साथ महत्वपूर्ण शिर्षकमा बजेट बिनियोजन गरेको थियो केही शिर्षकको काम भई राखेको छ, केही हुने प्रक्रियामा छन् भने केही शिर्षकको रकम चाहिँ कृषिमा लगानी गर्नका निम्ति केही सेवा सुबिधा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने भनि बजेट पारित भएको थियो । कृषिको लगानीका लागि हामीले गतआर्थिक बर्षमा बजेट बिनियोजन गर्यौँ तर कतै लगानी नलागेकाले हिउँदे अधिबेशन बाट यस बजेटलाई अन्य शिर्षकमा लगानी गर्ने योजना रहेको छ ।
(३) अढाई बर्षको अबधिमा काम गर्नका निम्ति कस्तो अबस्था रह्यो ? सहयोग असहयोग कस्तो पाउनु भयो ?
काम गर्दै जादाँ बाधा अट्चन आउनु कुनै नौलो कुरा हैन तर समस्यालाई समाधान गर्दै लगेको छु । सबै वडा अध्यक्ष,सदस्य सिङ्गो गाउँपालिकाको साथ सहयोग छ, काम गर्न सहज छ तर बिप्लबको चन्दा आतङ्कले कहिले काहीँ तनाब दिन्छ जोगिएर काम गर्नु परेको छ ।
(४) गाउँपालिकाको २÷३ ओटा वडामा होमिस्टे सञ्चालन रहेको पाईयो, त्यस होमिस्टे सञ्चालनको लागि गाउँपालिकाले कस्तो सहयोग गरेको छ ?
गाउँपालिकाको १ र २ वडा नम्बरमा गत बर्षबाट स्थानीय बासिन्दाहरुले होमिस्टे सञ्चालन गर्नु भएको छ । उहाँहरुको निजि लगानीमा खोलिएको हो र निजि लगानीमा खोलिएपनि गाउँपालिकाले विभिन्न ठाउँ जस्तै ः श्रीअन्तु,सिरुबारीमा रहेका होमिस्टेका अबलोकनको लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ ।
(५) होमिस्टे सञ्चालन गरेर बस्नु भएको लगानी कर्ताहरु के भन्नु हुन्छ ? उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पर्यटकीय क्षेत्र भएपनि त्यस ठाउँमा पुग्ने पर्यटक कमै मात्रामा जाने गरेका छन् । गएपनि होमिस्टे भन्दा बाहिर बास बस्ने गरेकोले आफुले सोचे जस्तो नभएको बताउँछन् । त्यस होमिस्टेमा पर्यटक गएपछि उनीहरुले जातजातिको लाखे नाच, तथा त्यहाँको लोकल परिकार खुवाउने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय जुन नेपाल भ्रमणको समयमा पहिला भन्दा पर्यटक आउने गरेको होमिस्टे सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
(६) नेपाल सरकारले घोषणा गरेका नेपालका एक सय गन्तब्यमा भोजपुरको मुन्दुम टे«लपनि उत्कृष्ट मानिएको छ । यसको बिकासमा गाउँपालिकाले अहिले सम्म के गरिरहेको छ । ?
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सय गन्तब्यमा मुन्दुम टे«ल पर्नु यो आफैँमा गौरव गर्नु पर्ने कुरा हो । पहिलेका दिनमा धेरै दुख गरेर यस ठाउँलाई हामीले स्थापित गरेको छौँ । गाउँपालिकाले अहिले सम्म शुरुको बर्षमा ६० लाख,पछिल्लो वर्ष ७ लाख,र गत वर्ष ६ लाख बजेट विनियोजन गरेका थियौँ र यस बर्ष भने गाउँपालिककाले कुनै रकम छुट्याएको छैन । यो वर्ष पर्यटन मन्त्रालयले ७० लाख पर्यटन् बोर्डले १० लाख र प्रदेश सरकारले दुई करोड छुट्याएको छ । मुन्दुम टे«लको लम्बाई ३५ किलोमिटर रहेको छ ।
(७) अन्तिममा जो भोजपुरको टेम्केमैयुङँ गाउँपालिका भ्रमण गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
पर्यटकीय गन्तब्यको सबै कुरामा उत्कृष्ट गाउँपालिका रहेको पर्यटकिय क्षेत्रमा जति पनि आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटक आउनु हुन्छ, एक पटक गाउँपालिका भ्रमण गरि सकारात्मक वा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिई मलाई अझ काम गर्ने हौसला प्रदान गर्नुहुन अनुरोध गर्दै गाउँपालिकाले गर्नु पर्ने सहयोग गर्नका निम्ति प्रतिबद्ध छु ।